Hay’adda Xuquuqda Aadanaha u qaabilsan QM ayaa wabixin ku sheegtay in ciidamo Soomaali ah… – Hagaag.com
Hay’adda Xuquuqda Aadanaha u qaabilsan QM ayaa wabixin ku sheegtay in ciidamo Soomaali ah…
Posted on 9 Juunyo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Eritrean soldiers wait in a line on September 11, 2018 to cross the border to attend the border reopening ceremony with Ethiopians as two land border crossings between Ethiopia and Eritrea were reopened for the first time in 20 years in Serha, Eritrea. - diplomacy border trade (Photo by Stringer / AFP)
Warbixin ka soo baxday Hay’adda Xuquuqda Aadanaha u qaabilsan Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socday Soomaaliya oo tababar ku qaadanayay saldhig militari oo ku yaalla Eritrea in ay ka qeyb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya.
Qaramada Midoobey waxay sheegtay in ay soo gareen warar sheegayo in ciidamada Soomaaliya lagu arkay magaalada Qaddiimiga ah ee Aksum ee Tigray iyaga oo ka barbar dagaallamaya ciidamada Eritrea.
“Waxaan helnay macluumaad iyo warar ku saabsn in ciidamada Soomaaliya laga soo daabulay saldhig militari oo ay tababar ku qaateen oo ku yaalla Eritrea si ay ugu biiraan dagaalka Tigray, waxaana la socday ciidamo Eritrea ah.”
Waxay hay’adda intaas ku dartay: “Waxaa lagu soo warramayaa in ciidamo Soomaali ah lagu arkay magaalada Aksum”.
Dowladda fedaraalka ee Soomaaliya ayaa horey u beenisay warar la isla dhex marayay oo ku saabsanaa in ciidamo Soomaali ah oo tababar u joogay Eritrea ay ka qeyb qaateen dagaalkii dhawaan ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga Itobiya.
Warbixinta Qaramada Midoobey waxaa sidoo kale ku xusan inay heleen warar ku aadan in xafiiska arrimaha dibadda iyo guddiga gaashaandhigga ee baarlamaanka Soomaaliya ay ugu baaqeen madaxweynaha in guddi xaqiiqo raadin ah loo diro Eritrea si loo baaro in ciidamo Soomaali ay ka dagaallameen gobolka Tigray.
“Qaramada Midoobey waxaa lagu wargeliyay in xafiiska arrimaha dibadda iyo guddiga baarlamaanka u qaabisan arrimaha gaashaandhigga in madaxweynaha ay ugu baaqeen in guddi xaqiiqo raadin ah loo diro Asmara, si ay baaritaan ugu sameeyaan arrinta,” ayaa lagu yiri warbixinta.
“Waxaa caddaatay in ciidankaas ay qeyb ka ahaayeen dagaalkii Tigray”
Warbixinta ka soo baxday Qaramada Midoobey waxaa ka hadlay siyaasiyiin uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka tirsan mucaaradka Soomaaliya, ahna musharrax madaxweyne.
Wuxuu sheegay in dowladda ay “qarineysay arrintan ku aadan in ciidamo Soomaali ah ay ka barbar dagaallameen ciidamada Eritrea ee ku sugnaa Tigray.”
“Maanta waxaa soo baxay oo caddaatay in ciidankaas ay qeyb ka ahaayeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray, wey dhammaatay xilliggii la iska qarinayay ama laga dhuumanayay mas’uuliyadda”, ayuu hadalkiisa ku daray.
“Waxaan dalbaneynaa in waaliddiinta jawaab la siiyo, waxaan dalbaneynaa in wiilashii Soomaaliyeed iyo gabdhihii loo qaaday dalka Eritrea ay dowladda ka jawaabto. Laakiin hadda waxaa soo baxday warbixin caalami ah oo arrintii ka markhaati kaceysa”.